सन्दीप लामिछानेको टोली मेलबर्न स्टार्स बिग ब्यास लिगको फाइनलमा, के फाईनलमा सन्दिप पनि खेल्छन् ? - News20 Media
सन्दीप लामिछानेको टोली मेलबर्न स्टार्स बिग ब्यास लिगको फाइनलमा, के फाईनलमा सन्दिप पनि खेल्छन् ?
February 6, 2020 February 6, 2020 N20LeaveaComment on सन्दीप लामिछानेको टोली मेलबर्न स्टार्स बिग ब्यास लिगको फाइनलमा, के फाईनलमा सन्दिप पनि खेल्छन् ?
काठमाडौं : मेलबर्न स्टार्सले बिग ब्यास लिग क्रिकेटको उपाधिका लागि फाइनलमा सिड्नी सिक्सर्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। अष्ट्रेलियाको मेलबर्न क्रिकेट मैदानमा बिहीबार भएको च्यालेन्जर राउण्डमा सिड्नी थन्डरलाई २८ रनले पराजित गर्दै मेलबर्न फाइनल प्रवेश गरेको हो। १९५ रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको सिड्नी थन्डरले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा १६६ रन मात्रै बनाउन सक्यो।
सिड्नी थन्डरका लागि एलेक्स रोसले ५८ र अर्जुन नाइरले ३० रन बनाए। मेलबर्नका लागि बलिङतर्फ हरिस राउफले ३ विकेट लिदा एडम जाम्पा र नाथन काउल्टर नाइलले समान २–२ विकेट लिए।
यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको मेलबर्नले निर्धारित २० ओभरमा मात्र २ विकेटको क्षतिमा १९४ रन बनाएको थियो। मेलबर्नका लागि ओपनर मार्कुस स्टोइनिसले ८३ रन बनाए। उनले ५४ बलमा ७ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे। त्यस्तै, निक लर्किनले पनि अविजित ८३ रन बनाए। निकै आक्रमक देखिएका लर्किनले ४९ बलमा ९ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे।
नेपालका सन्दीप लामिछाने आबद्ध मेलबर्न क्यालिफायर राउण्डमा सिड्नी सिक्सर्ससँगै पराजित हुँदै च्यालेन्जर राउण्डमा धकेलिएको थियो। सन्दीप भने बिग ब्यास छोडेर आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग–टु अन्तर्गत नेपाल, अमेरिका र ओमानबीचको त्रिदेशीय सिरिज खेल्न फर्किएका थिए। अब मेलबर्नले उपाधिका लागि फाइनलमा शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
सरस्वती युथ क्लबलाई पराजित गर्दै मच्छिन्द्र शीर्ष स्थानमा उक्लियो
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा मच्छिन्द्र फुटबल क्लब सरस्वती युथ क्लबलाई पराजित गर्दै लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ। सातदोबाटोस्थित एन्फा (अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ) कम्प्लेक्समा बिहीबार सम्पन्न पहिलो खेलमा मच्छिन्द्रले सरस्वतीलाई ६–१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लेको हो।
मच्छिन्द्रले खेलको पहिलो हाफमा एक गोल ग¥यो भने दोस्रो हाफमा पाँच गोल थप्यो। खेलको ४०औँ मिनेटमा देवेन्द्र तामाङले गोल गर्दै मछिन्द्रलाई शुरुआती अग्रता दिलाए। रञ्जित धिमालको क्रसमा उनले हेड गोल गरेका थिए। त्यसैगरी खेलको ५४औँ मिनेटमा मच्छिन्द्रका दीपक राईले एक गोल थप्दै आफ्नो टोलीको अग्रता दोब्बर बनाए। उनले गोल गरेको पाँच मिनेट पनि बित्न नपाउँदै मच्छिन्द्रका अर्का खेलाडी विशाल राई ९ए० ले गोल गरे। उनले खेलको ५९औँ मिनेटमा गोल गरेका थिए।
त्यसपछि खेलको ७७औँ मिनेटमा दीपक राईले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे। त्यस्तै खेलको दोस्रो हाफको अत्तिरिक्त समयमा मच्छिन्द्रले दुई गोल थप्पो। मच्छिन्द्रका सोमिद ओलुवावुनमी एडिलाजा र आन्द्रेस नियाले एक एक गोल गरे। त्यस्तै खेलको ८७औँ मिनेटमा सरस्वतीका कजिम बुसारीले पेनाल्टीमार्फत एक सान्त्वना गोल फर्काएका थिए। यससँगै ११ खेल खेलेको मच्छिन्द्रले २५ अङ्क जोडेको छ भने समान खेल खेलेको सरस्वतीको ४ अङ्क छ।
अमेरिकाविरुद्धको एक दिवसीयअघि नेपाललाई यति ठुलो झड्का
माघ २४ गते । शुक्रवार । श्री पशुपतिनाथको दर्शन गरि के-कस्तो छ तपाइको आजको दिन, हेर्नुहोस !!
त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि लागि नेपाली टिमको घोषणा , सोमपाल र बसन्त रेग्मी बाहिर ( को को परे हेर्नुस )
यस्तो छ नेपाल र ओमानको “हेड टु हेड” ! पछिल्ला चारै खेलमा नेपाल पराजित
February 4, 2020 N20
अष्ट्रेलियाबिरुद्धको पहिलो वनडेमा भारतको शर्मनाक हार , वार्नर र फिन्चले गरे भारतिय बलरको धुलाई
January 14, 2020 January 14, 2020 N20